Kooxda Manchester United oo dalab cusub ka gudbinaysa Robert Lewandowski – Gool FM
Kooxda Manchester United oo dalab cusub ka gudbinaysa Robert Lewandowski
(Manchester) 16 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay dalab cusub ka gudbinayso weeraryahanka naadiga Bayern Munich ee Robert Lewandowski.
Red Devils ayaa la rumeysan yahay inay isku dayday saxiixa xiddiga xulka qaranka Poland muddooyinkii la soo dhaafay, gaar ahaan xilli ciyaareedkii hore, laakiin waa ay ku guuldarreysteen inay u soo kaxaystaan Ingiriiska.
Lewandowski ayaa ku qanacsanaa inuu sii joogo garoonka Allianz Arena xilli ciyaareedka 2018-19, laakiin suuqa kala iibsiga ayaa dib u furaya bisha soo socota, illaa iyo haatanna ma go’aansan inuu qandaraaska kordhiyo.
Sida uu warinayo Wargeyska Kicker, Kooxda Bayern Munich ayaa samaynaysa isku daygeeda ugu dambeeya oo ay ku doonayso inuu 30-sano jirkaan u kordhiyo qandaraaskiisa, kaasoo haatan dhacaya sanadka 2021-ka.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Lewandowski uu ka war hayo xiisaha uga imaanaya kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain, wuxuuna hadda si dhab ah uga fikirayaa mustaqbalkiisa.
Man United ayaa lagu soo waramayaa inay dalab cusub u dirayso Lewandowski, laakiin waxa ay sidoo kale heystaan bartilmaameedyo kale.
Harry Kane oo ku jira & Loftus-Cheek oo ka maqan 27-ka xiddig ee xulka England u meteli doona Nations League oo lagu dhawaaqay
Real Madrid oo dhameystirtay heshiiska weeraryahaka kooxda Frankfurt ee Luka Jović